KHASNAJIGIIGUUD EE BAANKA SAYLAC OO SAQDII DHEXE BAXSAD KU GALAY JIBUUTI | Toggaherer's Weblog
Khasnajigii Baanka dawladda Somaliland ee degmada Saylac Mr. Cabdi Xasan Jabane, ayaa saqdii dhexe ee habeennimadii Arbacadii toddobaadkan si khiyaamo ah ugu baxsaday dhinaca dulka Jabuuti, kadib markii ay soo shaac-baxeen tuhunno la xidhiidha inuu khasnadda kala baxay lacago aan xaddigeeda la caddayn.
Baxsashada khasnajiga ayaa ka dambeysay, kadib markii ay degmada Saylac tageen koox hanti-dhawrayaal ah oo la sheegay inay u socdeen hawlgal baadhitaan khasnadda baanka ah oo uu muddooyinkan dambe hadheeyey dareenno shaki leh oo lagu xidhiidhinayey in khasnajiga baxsaday kala baxay lacago xaddi badan, balse aan cadadkeeda la sheegin.
Inkasta oo aan si cad loo shaacin sababta khasnajigu u baxsaday, haddana ilo xogogaal ah oo Saylac ku sugan, ayaa Jamhuuriya u xaqiijiyeen inay jirto lacag aan tiradeeda la caddayn oo ka maqan khasanadda bangiga, taas oo lagu xidhiidhinayo inuu lunsaday khasnajiga bangiga ee baxsadka ku galay Jabuuti.
Waxa kale oo wararku tibaaxeen in khasnajigani ku baxsaday ambalaaska cusbitaalka degmada Saylac, kadib markii uu si khiyaamo leh ugu wargeliyey maamulka cusbitaalka inuu gaadhiga Lawyacaddo kaga soo qaadayo xaaskiisa oo xannuunsanaysa, kadibna markii baabuurkii istaagay Lawyacaddo si kedis ah ugu tallaabay dhinaca xuduudka Jabuuti, waqtigaasoo sida la sheegay uu xidhnaa macawis iyo garan keliya.
Booliska degmada Saylac ayaa gacanta ku dhigay darawalkii waday gaadhiga ambalaaska ee uu ku baxsaday khasnajigu, iyada oo sidoo kalena wararku sheegeen in xabsiga loo taxaabay xaaska Mr. Jabane oo iyaduna ka tirsan shaqaalaha bangiga Saylac.
Arrintan ayaa yaab iyo fajac ku abuurtay bulshada ku dhaqan magaalada Saylac, kuwaasoo ay cunaha u mari la’dahay qaabka ninkani u baxsaday, waxana socota baadhis xooggan oo koox hanti-dhawrayaal Hargeysa ka tegay ku hayaan khasnadda iyo shaqaalaha bangiga si ay u ogaadaan xaddigga lacageed ee ka maqan baanka.